सीपी मैनाली राप्रपा अध्यक्ष बन्ने कुरा ! « रिपोर्टर्स नेपाल
सीपी मैनाली राप्रपा अध्यक्ष बन्ने कुरा !
काठमाडौं, १५ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा पाका कम्युनिस्ट नेता सीपी मैनालीको बोलीले तरङ्ग ल्याइदिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय बिताएका मैनालीले राप्रपा महाधिवेशनमा बोल्दै राजाहरुको तारिफ गरे ।
उनले राजाहरुलाई राष्ट्रवादी भने । यसो भन्दा हलमा तालीको गडगडाहट सुनियो । मैनालीको बोली सुनेर प्रचण्ड असन्तुष्ट बने । उनले मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष बन्न खोजेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । प्रचण्डले भने,‘सीपी मैनालीजी राप्रपाको अध्यक्ष बन्न लाग्नुभयो कयारे ।’
प्रचण्डको मन्तव्य पछि राप्रपाका संस्थापक नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द बोले । उनले युवावस्थामा कम्युनिस्ट नभए केही नबुझ्ने र पाको अवस्थासम्म पनि कम्युनिस्ट भइरहे केही नबुझेको ठान्नुपर्ने भनाई उदृत गरे । उनले मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष बन्न चाहेमा स्वागत रहने बताए । यसो भन्दा हलमा हाँसो गुञ्जियो ।
प्रेम आलेका कारण सयौं कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा
काठमाडौं, ३ माघ । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि उनीसँग सम्पर्कमा आएका सयौं
तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्ने
काठमाडौं, २ माघ । स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा हुने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको माग गर्दै दायर रिटको दरपीठ
काठमाडौं, २ माघ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको माग गर्दैै दायर भएको
जब प्रेम आले नारायणहिटीको बंकरभित्र पसे (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २ माघ । नारायणहिटी दरबार संग्राहालयको बंकरभित्र मन्त्री प्रेम आले पसे । बतास समूहले
पत्रकार इन्जिना कार्कीले बार्गेनिङ गरेर मबाट १६ लाख लिएको होः ज्ञानेन्द्र शर्मा (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २ माघ । व्यवसायी ज्ञानेन्द्र शर्माले आफ्नो बारेमा पत्रकार इन्जिना कार्कीले षड्यन्त्रपुर्वक कार्यहरु गरेको
कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
काठमाडौँ, ३ माघ। कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक जना महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध